Hindiya: 18 ruux oo ku dhintay dhisme ku soo dumay | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Hindiya: 18 ruux oo ku dhintay dhisme ku soo dumay
Hindiya: 18 ruux oo ku dhintay dhisme ku soo dumay
Ugu yaraan 18 ruux ayaa geeriyooday halka tira kale ku dhaawacmeen kadib markiii uu ku soo dumey dhismo ay daganaayeen maanta oo axad ah, sida ay ku warameyso warbaahinta maxaliga ah ee dalka Hindiya.
Dr Anagrag Bhargafa oo ah Madaxa Caafimaadka ee gobolka Uttar Pardesh ayaa wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu u sheegey in 18 qof oo dhimasha ah Isbitaalka la soo gaarsiiyey iyo Dadkale oo iyagu dhaawacyo qaba.
Wararka qaar ayaa waxaa ay sheegeyaan in Dadka dhaawacmey ay kabadan yihiin 25 qof iyada oo walina ay kooxaha Gurmadka ay dhismaha hoostiisa ay ka baadi goobeyaan dad wali ku xaniban Burburka hoostiisa.
Ra’iisul wasaaraha Hindiya Nrandra modi ayaa ka tacsiyeeyay dhacdadan, isagoona ballan qaadey in dowladdu ka shaqeyn doonto sidii gargaar u heli lahaayeen dadkii ku waxyeeladu soo gaartey.
Maqaal horeMidowga Musharixiinta oo kasoo horjeestay Go’aan kasoo baxay Dowladda Soomaaliya
Maqaal XigaHirshabeelle oo Xabsiga Baledweyne kasii daaysay ku dhawaad 10 dhalinyaro ah oo ku xirnaa muddo laba todobaad ah